5 Tips For ehamba ngololiwe EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 5 Tips For ehamba ngololiwe EYurophu
bona kanye amava kakhulu ngakumbi ngokuthi nazo ziqhube nguloliwe adventure European. Ukuhamba ngololiwe eYurophu yindlela quintessential ukuba kohambo Europe kwaye akukho mfihlakalo kutheni. the inethiwekhi kaloliwe i kuphuhliswa kakhulu ukuze abahambi unokuloyisa amazwe amaninzi neenkcubeko uhambo enye ibonwe. Njengalo naluphi uhlobo yokuhamba, kulungile ukuba Unokuzilungiselela njani ukuze uqinisekise ukuba unayo i uhambo ilula kakhulu mnandi kunokwenzeka. Nazi yethu 5 tips for ehamba ngololiwe eYurophu.
Ukuba Ufuna Ukuhamba Ngasentla 14 Days – Uphando ezahlukeneyo oololiwe iphumeza
Ukuba uceba ukubona kumazwe amaninzi ngoxa ehamba ngololiwe eYurophu kusenokuba bubulumko ukuba siqwalasele utyale imali Interrail Pass, okanye abemi EU ubize Eurail. An Interrail Pass uya kwenza yakho zokuhamba train Elula. kunjalo, Ukuba ukwindlela mali yaqiniswa, Amatikiti kuvumelekileyo ukusebenza akunjalo (ingakumbi ukuba ubukhulu becala uhamba ngasempumalanga Jemani ). Cinga ibhajethi yakho uze wenze uphando phambi kokuba incwadi lokuphumelela zakho zikwakhamisela. Iwebsite yethu saveatrain.com Yiyo le indawo ephelele ukuqala ukunceda ukucwangcisa uhambo lwakho lonke elaseYurophu.
Zama ukubekela eceleni izihlalo zakho
amatikiti etreyini eziifunekayo isihlalo zizinto ezimbini ezahlukeneyo. Itikiti ikuvumela ukuba ukukhwela uloliwe, kunye ubhukisho kuqinisekisa isihlalo kuloliwe ethile. ngaphambi uhambo lwakho qiniseka ukuba uqonde ukuba uloliwe lakho kufuna, uncoma, okanye na ukwamkela Ugcino isihlalo.
Ukuba kuyenzeka, zama ngabadlali isihlalo sakho, ngakumbi ukuba uhamba kumazwe ezithandwayo Linganisa afana Fransi , ElamaTaliyane okanye Speyin. Kuba kokuhamba ngololiwe eYurophu, wena akuyi kufuneka ukuba ngabadlali isihlalo sakho, kunjalo, ukukhwela kuloliwe kwaye ngethemba lokuba uza egqibelele asiyongcamango ilungileyo. Ungaba makaxelelwe ukuba aphume kwaphakathi kwakho isihlalo uhambo ukuba omnye umntu akuyalele ngayo. Ngokuba igcinelwe indawo yakho, ungakhetha ukuba ufuna i komphi okanye window isihlalo. Unako ukuhlala umva kwaye onwabele Ukuqeqesha ride Ukwazi ukuba ayiphazamiseki ukuya.
Gcina izinto zakho zikhuselekile
Ukuhamba ngololiwe eYurophu yaziwa njengenye iindlela eyenzwe ukuhamba. kunjalo, kubalulekile ukuba iqaphele ukuba pickpocketers, ngokukodwa kunye noololiwe ukuba bayeke kwizixeko ezinkulu. Musa ukushiya impahla yakho lungadala ngololiwe okanye station. on oololiwe ebusuku, ukuba ufuna ukulala, Qinisekisa ukuba ukufumana impahla ukuya nesakhelo kunye lock ibhayisekile encinane. Ukuze sibe noxolo lwengqondo, athwale pack esinqeni phantsi iingubo zenu ukugcina yakho yokundwendwela, phone kunye nawaphi na amaxwebhu ebalulekileyo ekhuselweyo na amasela ingozi.
Okungaphantsi kuninzi – tips for ehamba ngololiwe eYurophu
Ukuya ku namazwe ngamazwe okanye isixeko mzi waba imnandi yaye inika umdla uhambo. kunjalo, uhambo unokuba abalifunayo ukuba zithwele umthwalo onzima. Pakisha izinto ezibalulekile kwaye ushiye naziphi na izinto okanye iimveliso angafunekiyo emva.
Kuxhomekeka kuloliwe uhambela phambili, kubekho indawo yokugcina kuphela kwisithuba amanqwanqwa isihlalo kunye ezishelifini xa ehamba ngololiwe eYurophu. Ngaphandle kwe ephethe ityesi enkulu kwaye inzima, uphawu ubhaka okulula kuyenye indlela lula umthwalo wakho.
Pakisha izinto ezifanelekileyo zokuhamba ngololiwe eYurophu
Ukuhamba ngololiwe eYurophu inika imibono ezithandwayo; kunjalo, luluvo elungileyo ukundizisela ezimbalwa izinto ezingundoqo ukukunceda lihlaleni ixesha ingakumbi xa baqala uhambo ngaphezu 2 iiyure. Funda incwadi, ukubukela movie ekhompyutheni yakho, Bhala kwijenali umdla wakho okanye ndiqalise incoko nomnye umkhweli kwaye phambi kokuba uyazi ukuba uya kuba lapho uya elandelayo.
Uninzi loololiwe lunendawo yokutyela, iinqwelwana cafe okanye iinqwelo umthamo eza ngokuthengisa kwiisendwitshi, iziselo ezibandayo kunye ngaphezulu. Kodwa ke ukuba ngaba mali ohambahambayo tight okanye eqondene iimfuno Kadir, kububulumko ukuba izmuncumuncu nawe endleleni yakho.
Ukucinga umsebe ngololiwe eYurophu? Yiya e Gcina A Isitimela online ukuba ukuhlola konke okukhwela zethu kuphela kwaye uqale uceba adventure yakho elandelayo!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-tips-for-traveling-by-train-in-europe%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
tips uloliwe train Travel tips zokuhamba train traveltips